Toni Kroos oo dalab uga yimid kooxda Inter Milan %
Laacib Sports : Warar kala duwan ayaa sheegayaa in Laacib ka Toni Kroos ay daneeyneyso kooxda Inter Milan, Jariiradaha Talyaaniga ayaa qorayay in kooxda Inter Milan ay xiiseyneyso lasoo saxiixashada ciyaaryahanka khadka dhexe Real Madrid Toni Kroos bishan cusub Janaayo 2019-ka.
Kooxda Inter Milan ayaa waxay haatan 14 dhibcood nadiif ah u jirrtaa hogaamiyaasha horyaalka Serie A-da ee Juventus, xili sidoo kale ay ku guuldareysteen xili ciyaareedkan inay u gudbaan wareega 16-ka ee tartanka Champions League-ga.
Jariirada lagu Magacaabo Corriere Dello Sport ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in macalink kooxda Inter Milan ee Luciano Spalletti inuu helayo balan qaad ah in jeebka loogu ridi doono dhaqaale xoogan suuqa bisha Janaayo, si loo xoojiyo khadka dhexe ee kooxda Inter Milan.
Ciyaaryahankaan u dhashay Germany khadka dhexe na ka ciyaara ee Toni Kroos ayaa u muuqda inuu yahay bar-tilmaameedka koowaad ee kooxda Inter Milan, si uu booskan ugu buuxiyo suuqa kala iibsiga.
Laacib ka Toni Kroos ayaa kasoo muuqday safka kooxda Real Madrid in ka badan 200 kulan, tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Bayern Munich sanadkii 2014, isagoo kula guuleystay horyaalka La Liga iyo saddex jeer xiriir ah tartanka xiisaha badan ee Champions League intii uu joogay Spainish ka.
Ugu dambeyntii saxaafada dalka Spain ayaa daabacday warbixino badan ay si joogta ah u shaki galinayeen in Toni Kroos uu sii wadan doono safka rasmiga ah ee kooxda Real Madrid, xili Los Blancos ay sugeyso dalab soo jiidasho leh si ay u iibiso laacibkan qadka dhexe.
Laacib ka Toni KroosToni Kroos
Isco oo mustaqbalkiisa go’aan ka gaarray iyo Real Madrid